Ponzi Scheme Indian isku dhaceen Police ballaaran Crypto ku salaysan
Ponzi oo ka kooban barnaamijyo dhowr ah by dr a. Amit Lakhanpal, CEO of the Money Trade quful Group iyo Lauch ee Group Flintstone ah. Saraakiisha ayaa sheegay in Lakhanpal Abuuray cryptocurrency loo yaqaan Trade Money ku quful (MTC), oo uu si xoogan suuq bulshada Indian weynta si ay usoo jiitaan maal-galay heshiisyo kale kuteen. xafiiska An in Oriyon Business Park ay leedahay hay'adda horumarinta hantida maguurtada ah Flintstone Group ayaa la sheegay in “xarunta musuqmaasuq” iyadoo ay shaqaalaha lahaayeen inta badan oo ka mid ah fiisa been abuur ah; The maal-jaahiliinta “toban ilaa labaatan jeer oo kaliya afar ilaa lix bilood,” ayaa sheegay Times Of India. Waxaa sidoo kale sheegay in maal qaar ka mid ah ay ahaayeen xataa ballan qaaday baasabooro Caribbean, hantida maguurtada ah iyo bangiga Swiss xisaabay beddelkeeda ay maalgashi.
Waxaa lagu qiyaasaa in lacagta lagu qiyaasay lacag kasbadeen by nidaamka guud this Ponzi waa qiyaastii 500 crore, taas oo u dhiganta $ 6,699,450,000.
Inta lagu guda jiro isku dhaceen, Booliska Thane qabtay oo la xiray Taha Kazi, mid ka mid ah farsamayaqaannada muhiimka ah Hallo ah, laakiin weli raadinaya Lakhanpal iyo afar kale oo tirooyinka muhiimka ah ee khiyaamada.
Ponzi la baadhay ayaa maamulka deegaanka ka dib markii cabasho laga Agaasimaha Maamulka Delhi ee Pravin Agarwal ka dib markii lamoodaa ma helo shirkadda. Ku-xigeenka Taliyaha Police Abhishek Trimukhe yiri:
“Waxaan diiwaan dambi ah saldhigga booliska Chitalsar, halkaas oo eedeysanayaasha ku baayacmushtaray qadaadiic cryptocurrency a, iyo khiyaanaysay dad dhowr ah.”
Tan iyo markaas, Booliska ayaa haatan si rasmi ah soo saaray a “kiiska musuqmaasuq, xadgudubyada dembiyada, Diinlooda iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee IPC ah, marka lagu daro sharciga Maharashtra ee difaacidda ee Investors daneynaya, 1999, iyo sidoo kale sida waafaqsan Xeerka Technology Information”.
Inkasta oo ay wali aan la garanayn inta ay nidaamka Ponzi this saamaysay deegaanka, warbixinta booliska in weerar ay ka dhic doontaa hawsha kale ee Kailas Industrial Park, Vikhroli.
Ka dib markii kacday this, badan oo haatan aaminsan yihiin in fadeexad tani waa qayb ka mid ah Ponzi a aad u balaaran oo ka hawlgala baxay Dubai. Waxa dhawaan la sheegay in uu horey u Lakhanpal iskaashi la Xukuumadda sarraysnaantiisa Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum ayaa si ay u sameeyaan “Al Teller Group,” a oo fadhigeedu yahay Dubai xawaaladaha crypto Diamond-shabaab cusub. Waxay ujeeddadiisu tahay in la abuuro hantida blockchain in ay yihiin shubo la GEMS iyo la baayacmushtari karaa iyada oo la is-dhaafsiga ee-guriga. Waxaa la dhibi in Al Kasir Group ayaa hore u bilaabay “Pre Bilowga Blockchain Hantida qurbaan” iyada oo portal Al Kasir Group, kaas oo soo jiitay maalgashi. Haddii sheegay in tani ay tahay in xaqiiqda hooyada Ponzi u tuugo yaraa, weli la ogeyn.
Report Kraken Daily Market for 05.06.2018
$158M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Liechtenstein ee Bank Frick in ay bixiyaan maalgelinta tooska ah ee cryptocurrencies
Laga bilaabo Feb 28...
Too hore inay iska iibiso Cr ...